Chineke ndị Izrel na-efe na chi dị iche iche ndị Babịlọn na-efe (1-13)
Jehova kwuru ihe ga-eme n’ọdịnihu (10)
Nnụnụ na-eri anụ nke si n’ebe ọwụwa anyanwụ bịa (11)
46 Bel hulatara ala,+ Nibo huuru ehuru. E bukwasịrị ha n’elu anụmanụ, n’elu anụ ndị na-ebu ibu.+ Ha dị ka ibu na-anyịgbu anụmanụ ndị ike gwụrụ. 2 Anụmanụ ndị ahụ na-ehulata otu mgbe. Bel na Nibo agaghịkwa anapụtali onwe ha n’aka ha. Kama ịnapụta onwe ha, a ga-adọrọkwu hanwa* n’agha. 3 “Ndị ezinụlọ Jekọb na unu niile fọrọ ná ndị Izrel,+ geenụ m ntị. M nọ na-enyere unu aka kemgbe a mụrụ unu, na-elekọtakwa unu malite mgbe unu nọ n’afọ.+ 4 Unu megodị agadi, agaghị m agbanwe.+ Isi unu chagodị awọ́, m ka ga na-elekọta unu. Dị ka m na-eme kemgbe, m ga na-enyere unu aka, na-elekọta unu, na-anapụtakwa unu.+ 5 Ònye ka unu ga-eji tụnyere m ma ọ bụ mee ka mụ na ya hara?+ Ònye ka unu ga-asị na ọ dị ka m ka à ga-asị na mụ na ya yiri?+ 6 E nwere ndị na-anaghị eji ọlaedo dị n’akpa ha eme ihe bara uru. Ha na-eji ihe e ji atụ̀ ihe atụ ọlaọcha. Ha na-ego onye na-eji ígwè akpụ ihe, ya ejiri ọlaọcha ahụ kpụọrọ ha chi,+Ha akpọwaziere ya isiala, fewekwa ya.+ 7 Ha na-eburu ya n’ubu ha.+ Ha na-eburu ya busa ebe ọ ga na-adị, ya akwụrụ ebe ahụ. Ọ naghị esi ebe ahụ apụ.+ Ndị mmadụ na-eti mkpu, na-arịọ ya arịrịọ, ma ọ naghị atụpụrụ ha ọnụ. O nweghị ike ịnapụta onye na-ata ahụhụ.+ 8 Ndị mmebi iwu, chetanụ ihe ndị a. Obi sie unu ike, burukwanụ ha n’obi. 9 Chetanụ ihe* ndị mere ọtụtụ afọ gara aga,Na abụ m Chineke. E nweghị Chineke ọzọ dị. Abụ m Chineke. E nweghịkwa onye dị ka m.+ 10 Ọtụtụ afọ tupu ihe ga-eme emee, m na-ekwu na ọ ga-eme. Ọtụtụ afọ tupu e mee ihe a na-emebeghị, m na-ekwu na a ga-eme ya.+ M na-asị, ‘Ihe m kpebiri* ga-emerịrị,+M ga-emekwa ihe ọ bụla dị mụ mma.’+ 11 M na-akpọ nnụnụ na-eri anụ ka o si n’ebe ọwụwa anyanwụ bịa.+ M na-akpọkwa onye ga-emezu ihe m kpebiri* ka o si n’obodo dị anya bịa.+ Ekwuola m ya. M ga-emekwa ya. Ezubela m ime ya. M ga-emekwa ya.+ 12 Ndị obi ha kpọchiri akpọchi,Ndị na-anatụdịghị eme ezi omume, geenụ m ntị. 13 Oge m ga-egosi otú m si bụrụ onye ezi omume dị nso. Ọ dịghị anya. M gaghị egbu oge ịzọpụta ndị m ga-azọpụta.+ M ga-azọpụta ndị bi na Zayọn, meekwa ka ndị Izrel dị ebube.”+
^ Na Hibru, “ihe mbụ.”
^ Ma ọ bụ “m zubere.”